दुवईमा लाइसेन्स नलिई कुनै कार्यक्रम नगर्न सरकारको चेतावनी, फेला परे ठूलो आर्थिक सजाय हुने - Arghakhanchi Saptahik
Home Slider खाडी बिशेष दुवईमा लाइसेन्स नलिई कुनै कार्यक्रम नगर्न सरकारको चेतावनी, फेला परे ठूलो आर्थिक सजाय हुने
दुवईमा लाइसेन्स नलिई कुनै कार्यक्रम नगर्न सरकारको चेतावनी, फेला परे ठूलो आर्थिक सजाय हुने
दुवई, असोज २
युएईमा कृयाशिल सामाजिक काम गर्ने उद्धेश्यले बनाइएका क्लवहरु वा सामाजिक संस्थाहरुले सरकारी अनुमति नलिई कार्यक्रम नगर्न यहाँको सरकारी निकायले चेतावनी दिएको छ । त्यस्ता संस्थाले विना कुनै जानकारी र सरकारी अनुमति विना कार्यक्रम गरेको फेला परेमा कडा दण्ड, सजाय हुने सामाजिक विकास प्राधिकरण(सिडीए) का एक उच्च अधिकारीले चेतावनी दिएका छन् ।
गल्फन्यूजका अनुसार सिडिएले नै दुवईमा हुने सम्पूर्ण सामुदायिक क्लव र सामाजिक संघसंस्थाहरु तथा त्यसले आयोजना गर्ने साँस्कृतिक, सामाजिक कार्यको अनुगमन गर्ने गर्दछ । सन् २०१४ देखि यो नियम कडाईका साथ लागु गरिंदै आएको समाचारमा उल्लेख छ । त्यस्ता संस्थाहरुले कार्यक्रम आयोजनाको कानूनी अधिकार प्राप्त गर्न लाईसेन्स लिनु पर्दछ जुन निक्कै महँगो छ । त्यसैले यो व्यवस्थालाई छल्न कतिपय संस्थाहरुले आफ्नो देशको कुटनीतिक नियोगको आयोजना भनेर कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।
सामुदायिक क्लवहरु त्था सामाजिक संस्थाहरुले के गर्दैछन् ? उनीहरुले कस्तो सेवा दिएका छन् ? भन्ने बारेमा प्रष्ट जानकारीका लागि तिनले सरकारी निकायबाट अनिवार्य रुपमा लाइसेन्स लिनु पर्दछ र हामी त्यसका लागि आग्रह गर्दछौं सिडीएका महानिर्देशक खालिद अल कमदाले भनेका छन् । त्यसरी दर्ता हुने सामुदायिक क्लवले बैंक खाता खोल्न, कामदार राख्न पाउँछन् ।
सिडीएका महानिर्देशक कमदाले कुनै पनि काम लुकीछिपी हुन नसक्ने बताए । उनले कार्यक्रमहरुका बारेमा सामाजिक सञ्जाल(फेसबुक, ह्वाट्स्एप) जस्ता माध्यम मार्फत पनि सहजै पत्ता लगाउन सकिने बताए । यदि लाईसेन्स नलिई त्यस्ता गतिविधि गर्नेहरु कारवाहीमा पर्ने उनले चेतावनी दिए । कुनै संस्थाले त्यसरी लुकीछिपी कार्यक्रम गरेमा २ हजार देखि १० हजार दिरम जरिवाना तिर्नुपर्ने उनले बताए । तर आफूहरुको उद्धेश्य कसैलाई जरिवाना तिराउनु भन्दा पनि कानूनी रुपमा दर्ता भएर गतिविधि हुन् भन्ने रहेको उनको भनाई छ । तर महँगो शुल्क र पेचिलो प्रकृयाका कारण धेरै संस्थाले लाइसेन्स लिन सकेका छैनन् । हरेक देशका लागि ५ वटा संस्थाले मात्र त्यस्तो लाइसेन्स लिन पाउँछन् ।